umthetho wabucala - EducationBro Study Magazine Akude
Lo mgaqo-nkqubo wabucala iye yaqulunqwa ukuba babakhonze ngcono abo baxhalabile nendlela yabo 'Information ezikubonisayo’ (PII) isetyenziselwa online. PII, njengoko kuchaziwe kwi US umthetho wabucala nokhuseleko ulwazi, Olulwazi enokusetyenziselwa ngokwakhe okanye nezinye iinkcukacha ukuchonga, zoqhagamshelwano, okanye ukufumana umntu ongatshatanga, okanye ukuchonga ngamnye kwimeko. Nceda funda yethu umgaqo-nkqubo wabucala ngenyameko ukufumana ukuqonda ngokucacileyo esiqokelela ngayo, ukusebenzisa, ukukhusela okanye ngenye ukuphatha uLwazi waziwe ngokungqinelana website yethu.
Yiyiphi inkcazelo yobuqu ntoni esiziqokelelayo ebantwini ukuba watyelela blog yethu, website okanye app?
Asazi ukuqokelela ingcaciso iindwendwe site yethu okanye ezinye iinkcukacha ukukunceda kunye namava akho.
Xa ngaba siqokelela inkcazelo?
Siqokelela iinkcukacha xa wena okanye ufake iinkcukacha kwisayithi yethu.
Kusinika ingxelo iimveliso okanye iinkonzo zethu
Sazi njani ukuba usebenzise ulwazi yakho?
Sisenokusebenzisa iinkcukacha esiziqokelelayo kuwe xa ubhalisa, ukuthenga, ungene kwincwadana yethu, ukuphendula uphando okanye ukuthengisa unxibelelwano, sefa i website, okanye usebenzise ezinye izinto ezithile site ngezi ndlela zilandelayo:
website yethu iskeniwe rhoqo imingxunya ukhuseleko mingcipheko ezaziwayo ukuze wenze utyelelo yakho site yethu ikhuseleke kangangoko.
Sisebenzisa Krwaqula rhoqo seNgozi.
Asazi ukusebenzisa isiqinisekiso SSL
• Sinikeza kuphela amanqaku kunye nolwazi. Asikhe cela inkcazelo yobuqu okanye yabucala ezifana amagama, iidilesi email, okanye amanani ekhadi lokuthenga ngetyala.
Ngaba sisebenzisa 'cookies'?
Ewe. Cookies zi iifayile ezincinane ukuba isiza okanye udluliselo umnikezeli ngenkonzo ukuba hard drive yekhompyutha yakho ngokusebenzisa umkhangeli Web (ukuba uvumela) eyenza isayithi okanye iinkqubo umboneleli nkonzo ukuba ukuqonda umkhangeli yakho ngokufaka ukukhumbula ulwazi oluthile. Njengokuba, Sinokusebenzisa iikuki kusinceda ukukhumbula ize isebenze izinto kwinqwelo yakho yokuthengela. Kananjalo kusetyenziswa ukusinceda ukuba siqonde okukhethayo esekelwe kumsebenzi site lwangaphambili okanye yangoku, nto leyo esenza sikwazi ukunikezela ngeenkonzo eziphuculiweyo. Siyazisebenzisa ikuki ukuze incede thina siqulunqe idata lamntu izithuthi site ne site intsebenziswano ukuze sikwazi ukufundisa amava engcono site kunye nezixhobo kwixesha elizayo.
Siye sisebenzise iicookies:
• Qonda kwaye ugcine iinketho yomsebenzisi ukuze utyelelo elizayo.
• Gcina ingxelo kwezaziso.
• Ukuqulunqa idata lamntu site unxibelelwano yezithuthi isiza ukuze anikele amava engcono site kunye nezixhobo kwixesha elizayo. Sinokusebenzisa iinkonzo wesithathu-iqela othenjiweyo ezikhangela olu lwazi egameni lethu.
Ungakhetha ukuba icomputer yakho iyakulumkisa qho cookie uthunyelwayo, okanye ungakhetha ukuba kucinywe zonke cookies. Usenza oku ngokusebenzisa izicwangciso zakho umkhangeli. Ekubeni umkhangeli ingahluka kancinci, khangela Menu Help umkhangeli wakho ukuba ufunde indlela echanileyo ukuyiguqula cookies zakho.
Ukuba uvula cookies off, eyomeleziweyo lukhubaziwe. Oku akuyi kuchaphazela amava somsebenzisi ezenza akwariyam lwakho kakuhle kakhulu kwaye ngeke zisebenze kakuhle.
kunjalo, uya kuba nako odolo .
Thina ungathengisi, urhwebo, okanye ngenye ukutshintshela amaqela ngaphandle Information yakho waziwe ngaphandle kokuba Ukubonelela abasebenzisi isaziso kwangaphambili. Oku akubandakanyi website amahlakani kunye namanye amaqela abo kusinceda yokusebenza website yethu, siqhuba ishishini lethu, okanye ukukhonza abasebenzisi zethu, kunjalo nje nezo amaqela ayavumelana ukuba uwugcine ulwazi oluyimfihlo. Kwakhona ukukhupha ulwazi xa ukukhululwa oko xa kufanelekile ukuba athobele umthetho, ukunyanzelisa imigaqo site yethu, okanye ukukhusela ezethu okanye abanye’ amalungelo, kwipropati okanye ukhuseleko.
kunjalo, ulwazi undwendwe non-ezikubonisayo lunganikezelwa kwamanye amaqela okuthengisa, intengiso, okanye ezinye.
Maxa wambi, ngokubona yethu, Singaquka okanye anikele iimveliso okanye iinkonzo wesithathu-party kwi website yethu. Ezi sayithi wesithathu-iqela zinemigaqo zabucala eyahlukileyo ezizimeleyo. Thina ngoko xanduva okanye butyala umxholo kunye nemisebenzi yezi ndawo ezinxulumene. lyo, sifuna ukukhusela isidima site yethu kwaye samkela nayiphi ingxelo malunga nezi ndawo.
iimfuno zentengiso Google inokushwankathelwa ngokuthi Google i-siseko Advertising. Baya ubeke endaweni yokubonelela amava entle kubasebenzisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?HL = en
Sisebenzisa Google AdSense Advertising kwi website yethu.
uphando, njengomthengisi wesithathu-iqela, isebenzisa ezicookies iintengiso kwisayithi yethu. Google ukusebenzisa ze cookie DART yenza ukuba iintengiso kubasebenzisi zethu ezisekelwe ndwendwelo site yethu kunye nezinye iindawo kwi-Internet. Abasebenzisi zingakhetha-kokusetyenziswa ze cookie DART ngokundwendwela iGoogle iNethiwekhi neSiqulatho Network umgaqo-nkqubo.
Siphumeze oku kulandelayo:
• Ngabahlali neyeZinto ingxelo
thina, kunye nabathengisi zeqela lesithathu ezifana Google ukusebenzisa lokuqala-iqela cookies (ezifana cookies Google Analytics) ne cookies wesithathu-iqela (ezifana nqakraza cookie) okanye ezinye izinto zeqela lesithathu kunye ukuqulunqa iinkcukacha ngokuphathelele unxibelelwano umsebenzisi koko zentengiso kunye neminye imisebenzi yenkonzo ad njengoko zinxulumene website yethu.
Abasebenzisi ungacwangcisa iinketho ngendlela Google sipapasha kuwe usebenzisa i Izicwangciso Google Ad page. Kungenjalo, ungenza Ungaphuma ngokundwendwela iphepha lweNethiwekhi yeNzame zokuThengisa usenokuphuma okanye ngokusebenzisa Umkhangeli Analytics Google usenokuphuma bongeze.
CalOPPA ngumthetho karhulumente yokuqala isizwe ukuba zifuna websites ezorhwebo kunye neenkonzo ze-intanethi post-nkqubo wabucala. yolula Fikelela yomthetho kakuhle ngaphaya California ukuba ifune nawuphi na umntu okanye inkampani eUnited States (kwaye kucacile ihlabathi) ukuba isebenza websites ukuqokelela Ulwazi waziwe kubathengi California post esekuhleni umgaqo-nkqubo kwiwebhusayithi esichaza kanye ulwazi yaqokelelwa kunye nabo bantu okanye iinkampani ngaye ekwaBelwana. – Bona apha: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Ngokutsho CalOPPA, siyavumelana kulandelayo:
Abasebenzisi yiya kwiziko lethu bengaziwa.
Xa le nkqubo wabucala wadalelwa, siza kuyongeza ikhonkco kwi home page yethu okanye ubuncinane, kwiphepha lokuqala ezibalulekileyo emva kokungena website yethu.
ikhonkco yethu bucala nkqubo ibandakanya elithi 'Privacy’ kwaye ngokulula zifumaneka kwiphepha echazwe ngasentla.
Uya kwaziswa ngazo naziphi na iinguqulelo bucala nkqubo:
• On bucala nkqubo yethu Page
Unako ukutshintsha iinkcukacha zakho zobuqu:
• Imeyile ukuba
• Ngokungena kwi-akhawunti yakho
ntoni site yethu ukujongana njani Musa ukuKhangela iimpawu?
Siyazihlonipha Musa ukuKhangela imiqondiso kunye nendlela, isityalo cookies, okanye intengiso ukusetyenziswa xa Do Not Track (DNT) indlela umkhangeli endaweni.
Ngaba site yethu ukuvumela wesithathu-party tracking yokuziphatha?
Yinto Kukwabalulekile ukuqaphela ukuba sivumela wesithathu-party tracking yokuziphatha
CUP (Nabasebancinci Privacy Protection Act)
Xa kufikwa nokuqokelelwa inkcazelo yobuqu kubantwana abangaphantsi kweminyaka 13 iminyaka ubudala, Abantwana Online Protection Privacy Act (CUP) ubeka abazali kulawulo. I-Federal Trade Commission, eunited States’ okhusela abathengi, enyanzelisa Rule COPPA, esicacisa ukuba nabaphathi sayithi kunye neenkonzo zeintanethi kufuneka kwenza ukuba ukhuseleko abantwana kunye nokhuseleko online.
Asazi kukurhweba ngaphantsi kweminyaka ngokukodwa kubantwana 13 iminyaka ubudala.
I-Fair Information Practices Imigaqo kuba ngumqolo kukuzimela umthetho eUnited States kunye neengqikelelo iquka idlale indima ebalulekileyo kuphuhliso nemithetho yokhuseleko data ehlabathini lonke. Ukuqonda Fair Information Practice siseko nendlela kufuneka ezaphunyezwayo kakhulu ukuthobela imithetho yabucala eyahlukeneyo ekhusela ulwazi lobuqu.
Ukwenzela ukuba ihambelane Fair Information Practices siya kuthabatha inyathelo ephendulayo zilandelayo, kufuneka kubekho ulwaphulo data:
Siza kwazisa abasebenzisi ngokudlula kwi-site isaziso
• ngaphakathi 7 iintsuku zomsebenzi
Si yavuma ukuba Individual lungiso elifuna ukuba abantu banelungelo ukulandela ngokusemthethweni amalungelo ukunyanzeliswa ngokuchasene abaqokeleli zinkcukacha kunye zokwenza elingaphumeleliyo ukulandela umthetho. Lo mgaqo kufuna nje ukuba abantu banamalungelo ukunyanzeliswa ngokuchasene abasebenzisi data, kodwa ukuba abantu elichaphazelakayo iinkundla okanye ii-arhente zikarhulumente ukuphanda kunye / okanye kutshutshiswe-non lothotyelo abaqhubekekisi data.
NGABA spam Act
Itoti-spam Act ngumthetho lilenya imithetho imeyile yorhwebo, simisela iimfuno imiyalezo yorhwebo, unika abamkeli ilungelo lokuba emails sithintelwe kokuthunyelwa kubo, kwaye Icacisa izohlwayo lobutsha sanctions.
Siqokelela idilesi yemeyile yakho ukuze:
• Thumela ulwazi, ukuphendula imibuzo, kunye / okanye nezinye izicelo okanye imibuzo
• imiyalelo Process kwaye ukuba athumele inkcazelo kunye nohlaziyo eziphathelele kwi-odolo.
• Thumela ulwazi olongezelelweyo ezinxulumene nemveliso kunye / okanye wenkonzo yakho
• Market kuluhlu lwethu lokuposa okanye ukuqhubeka ukuthumela emails kubaxhasi bethu emva intengiselwano original kwenzeke.
Ukuze abe ngokungqinelana CANSPAM, siyavumelana kulandelayo:
• Ukusebenzisa izifundo ayiyonyani okanye iyalahlekisa, okanye kwiidilesi email.
• Ukuchonga umyalezo isibhengezo kwezinye ngendlela efanelekileyo.
• Quka idilesi kwikomkhulu ishishini okanye site yethu.
• Esweni iinkonzo email marketing wesithathu-iqela lokuthobela, ukuba ubani isetyenziswa.
• Beka opt-phandle / izicelo awunikeli ngokukhawuleza.
• Vumela abasebenzisi ukuba ungabhalisi ngokusebenzisa ikhonkco emazantsi email nganye.
Ukuba nangaliphi ixesha ongathanda ukuba ungabhalisi ufumana imbalelwano ngeimeyile elizayo, uyakwazi imeyili apha
• Landela le miyalelo emazantsi email nganye.
kwaye ngokukhawuleza ziya kukugxotha BONKE imbalelwano.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nale nkqubo wabucala, ungaqhagamshelana nathi ngokusebenzisa ulwazi ngezantsi.
Khoriva esitratweni, 50
Last Yahlelwa ngomhla 2016-07-05